I-salmon enamazambane abhakiwe, inhlanganisela ethokozisayo yama-flavour | Ukupheka Kwekhishi
I-Salmon iwukudla okuthakazelisa kakhulu ngenxa yokuqukethwe kwayo okunamaprotheni amaningi futhi omega-3 fatty acids, ezinikela ekunciphiseni amazinga e-plasma cholesterol namazinga e-triglyceride, futhi futhi andise uketshezi lwegazi. Ngakho-ke, kunconyelwa kakhulu labo abanesifo senhliziyo.
I-salmon ingaphekwa ngezindlela eziningi; yosiwe futhi nge isosi yedill yisidlo esihle kakhulu, kepha futhi singahamba naso namazambane okubhaka futhi ikwenze uthandeke kakhulu ezinganeni nakwabadla inyama esidala. Amazambane abhakiwe kulula ukuwapheka futhi ahlobise kakhulu inyama kanye nenhlanzi.
2 okusha salmon fillets
Izipuni eziyi-2 zewayini elimhlophe
Sishisa ihhavini iye ku-180º.
Sihluba amazambane bese sisika amashidi kulungile. Siphinda futhi sisike u-anyanisi sibe yimichilo kaJulienne bese sikubeka konke endishini yokubhaka noma kwi-pyrex. Sisela ngejet enhle yamafutha omnqumo, iwayini elimhlophe kanye nenkathi. Ngezandla zethu sivuselela kahle ukuze amafutha agcwale kuwo wonke amazambane.
Sethula kufayela le- kuhhavini ngo-180ºC kuze kube yilapho amazambane esethenda, cishe imizuzu engama-20-30. Sabekisa.
Sipheka i- salmon eyosiwe. Ukwenza lokhu, sihlukanisa inkalo ngayinye kabili, usawoti kanye nopelepele bese sibeka ku-grill isikhumba sibheke phezulu. Ngemuva kwemizuzu emi-2 noma emi-3 siyayijika bese kuthi ukushisa sekuvele kube phansi siqede ukupheka.
Sakha i- umbhede wamazambane kubhaki epuletini bese ubeka ngaphezulu imicu ye-salmon, enongwe futhi ephekwe ku-grill.
Lapho amazambane esabalala ngokwengeziwe ekhasini lokubhaka, ngokushesha azopheka. Khetha eyodwa ifonti ebanzi noma ngabe kubonakala kungenangqondo.
Amazambane angama- ukuhambisana okukhulu zombili izinja nezinhlanzi.
Imininingwane engaphezulu -I-salmon ne-dill sauce
Isikhathi esiphelele Imizuzu ye-40
Ama-Kilocalories ngokusebenza ngakunye 220
Side Dish Ungadliwa, Ukupheka Kwenhlanzi
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Izitsha » Side Dish Ungadliwa » I-salmon eyosiwe namazambane abhakiwe
Ama-donuts eshokoledi, ngubani omelana nakho?
Iminenke kumhluzi, iresiphi ejwayelekile yaseCádiz